Keydso Caafimaadkaaga & Jimicsigaaga Go'aannada Sannadaha Cusub ee keydka.Com - Jimicsiga Fitness
Bogga ugu weyn » blog » Ku keydi go'aamadaada sanadaha cusub Caafimaadkaaga iyo Jimicsigaaga keydka.Com
Ku keydi go'aamadaada sanadaha cusub Caafimaadkaaga iyo Jimicsigaaga keydka.Com
Dhammaadka bisha Janaayo waxay soo afjareysaa qaraarada badan ee sanadka cusub. Dhammaanteen waanu joognaa: waxaad bilowday 2019 qoraal xusuus leh, ballanqaaday in ay ka shaqeyneyso oo aad u fiicantahay oo akhriso buugag badan. Laakiin si lama filaan ah, waa February. Xasaasiyadaha adag ayaa dhimatay, Iskuduwaha Super Bowl ee soo dhaweynta, iyo si toos ah ayaad ugu soo laabaneysaa qalabka soo dhaweynta ee caadooyinkaagii hore.
Hadday taas maqasho, ha welwelin. Weli waxaad heysataa wakhti aad ugu tala gashay sannadkii ugu fiicnaa.
Ka dhig qawaaniinta 2019 ujeedooyinka cad.
Raadinta caafimaadkaaga iyo raacitaanka ujeedooyinka jirdhiska ayaa kaa qaadi kara kharajka boorsadaada. Fiitamiinada iyo waxyaabo kale, cunto cusub iyo jimicsiga jimicsiga ayaa billaabanaya in ay qaali noqdaan, gaar ahaan marxaladaha diyaargarawga sannadka cusub.
Dhiirigelinta ayaa kor u kacaya. Baaskiilahaaga jimicsiga ayaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu dareemo in uu kugu jeesjeesayo, iyo in treadmill laga yaabo inuu bilaabo inuu helo wax yar boodh.
Waxaan leenahay xalal fudud oo fududeynaya in dib loo soo celiyo xallintaada kuna dhajino caadooyinkaaga cusub ee jirdhiska - adigoon jabin bangiga.
Isku day inaad qaadato wax cusub.
Kala duwanaanshuhu waa bahalka nolosha, sida ay yiraahdaan, iyo taasi waxay u socotaa hawlahaaga. Haddii kalluunkaagu uu bilaabo inuu dareemo caajis, isku day inaad wax ka beddesho subaxii kickboxing ama yoga kulul.
Waxaad la yaabi doontaa sida tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sameyn karto si aad u hagaajisid muruqyada muruqyada, iyo taladaada.
Ka bax dibadda.
Sidaa darteed haddii ay dhacdo mid ka mid ah qaboobaha ugu qabow ee taariikhda dhawaanta la soo dhaafay? Ha u ogolaanin in cimilada yaryar ee aadka u xoogan ay kaa ilaaliso raacitaanka yoolalka firfircoon. Iska hubi kuwan Dhibcaha ka soo jeeda dharka adag ee dibadda sida MountainWarehouse iyo Campmor, halkaas oo aad ka heli karto labada naadi ee ugu fiican ee skis, teendhooyinka cimilada ama jaakad jilicsan si aad uhesho inaad guurto, iyadoon loo eegin xilli.
Baro awoodda smartwatch.
Mararka qaar, dhamaanteen waxaan ubaahanahay farsamooyin farsamo. Marka qalabka jilicsan ee aanad kuu sheegi karin waqtiga keliya, laakiin aad sii wadatid heerka garaaca wadnahaaga, tallaabooyinkaaga maalinlaha ah, heerka dhaqdhaqaaqaaga iyo xusuusintaada, waxaad ku dari doontaa dhiirigelin si aad u hesho dhaqdhaqaaqa oo aad diirada saarto safarkaaga mustaqabalka.
Our Tilmaamaha Iibsiga Caafimaadka & Fayoqabka wuxuu ku siinayaa jumpstart si uu kaaga caawiyo inaad gaarto yoolalka 2019, oo leh qalabka ugu sarreeya qiimaha ugu qiimaha badan.
Ilmahaaga cayaarta qalabka isboortiga.
Maqnaanshaha dharka ciyaaraha ee xiisaha leh ayaa kaa dhigay? Isbeddellada fudud sida iftiiminta jidkaaga a laba kabo oo cusub ama lagu daro taang cusub oo aad ku wareegto wareeggaaga ayaa hagaajin kara dhiirigelintaada.
Ka bax sariirta adigoon ku dhufaneysid gambaleelka iyo jimicsiga bedelkeeda. Waxaad ku keydsan kartaa xayawaan tayo sare leh, xitaa inta aad u egtahay malaayiin lacag ah. Horay u sii, keegaada iyo sidoo kale sidoo kale (fiican, ku dhawaad).
Ma ogtahay in muusikadu saameyn ku yeeshaan jimicsigaaga? Waa inaad bilowdaa diirranaantaada kudhowaad 120 bpm-ka fikir "Billie Jean" by Michael Jackson-ka dibna beddel qaababkaaga ku xiran waxqabadkaaga, oo ka bilaabma 130-160 bpm si aad ula socoto xawaarahaaga.
Sheekada deg dega ah waxay kugu riixi kartaa waqtiyada rikoodhka ah ee jadwalka maalinlaha ah, halka gabay aad u kacsan, heesaha dhexdhexaadka ah uu kaa caawin karo inaad culays saaro miisaanka-kor u qaadista iyo dhisida awoodda asaasiga ah. Dib u cusbooneysii muyuusikada, cusbooneysii maskaxdaada.
Raadinta fikrado badan? Savings.com wuxuu leeyahay xulasho mar kasta oo la cusbooneysiiyay rasiidh iyo dib u celin si loo badbaadiyo boorsadaada, iyo qaraaradaada.
EBook BILAASH AH: Buugga Cunto ee Weyn ee Milkshakes Healthy & Smoothies
Categories Select Category 1 Isbuuc Cunto (1) 2 Isbuuc Cunto (1) 24 Saacadda Fitness (3) A1Supplement (5) Qalabka (5) Adidas (2) Dumbbells hagaajin karo (3) Bakhaarka Ebook ee cajiibka ah (3) Amazon (39) Amrion (1) Fitness wakhti kasta (1) Xeebaha (11) Jimco Madow (16) Blog (20) Jimicsiyada (1) Faallooyinka (1) Jidhka dhiska.com (2) Jidhka dhiska.com UK (1) Buug (7) Xulashada botanic (2) Bowflex (46) Kanada (5) Treadclimber (17) BPI Sports (2) BulkSupplement.com (2) CB-1 Miisaan Gainer (2) Qarniga MMA (1) Tababbarka xariifka ah (4) Dharka (14) Dib-u-dhiska Jimicsiga (10) Hoodie (4) T-Shirt (6) Jimicsiga Dahabka (1) Quruxleyda (1) Hal abuur (2) Cyber ​​Isniinta (2) Daily gubasho (1) Cuntada Tooska ah (1) Cuntada-loo-tago (2) Maqaayada.com (3) Dukan Cuntada (1) DVD (15) eBay (4) Ebook (20) Xirmooyinka (8) Xurnimo (1) Qaab (4) Siman (2) Yowza (1) QornoOnline (1) Jimicsiga Baaskiilka (5) Qaab (4) Schwinn (1) Wareeg (2) Toosan (1) Facebook (1) Bixinta T-Shirt (1) Baruurta Gubta (6) Luminta Baruurta (1) Maalinta Aabaha (1) Dhamaadka Khadka (3) Jimicsiga Jirka (1) Cagta (3) Cagaha raadiyaha (3) Bilaash (39) Gaiam (3) Gander Mountain (1) Garcinia Total (1) Bixinta (17) Groupon (2) Jimicsiga Martida (2) Ciid wanaagsan (3) Qaadi HCG (1) Kormeerayaasha Heerka Wadnaha (6) Garmin (2) Polar (1) Waqtiga (2) Suunka Laabta Xadhig (1) Jirdhiska Guriga (2) Horizon Fitness (4) Guriga nafaqada (1) IVL (5) Cagaarka tamarta (3) Jaan-qaadista Miisaanka Cusub ee Joe (1) K-Mart (1) Kelly's Warehouse Warehouse (2) Keto (6) Maalinta Shaqaalaha (1) Jimicsiga Nolosha (1) Majaladaha (1) Maalinta Xusuusta (4) Qalad (3) Qorno (3) Noocyo (2) Maalinta Hooyada (1) Murqo & Xoog (4) NASM (1) Miisaan cusub (4) Muhiimad Cusub (1) Nike Store (1) Cuntada nafaqada (1) Qorshaha Paleo (2) Pedometer (1) Fitbit (1) Qorno (1) Tababbarka kahor (12) Maalinta Madaxweynaha (1) Kuuboon daabacan (3) Soo bandhig.com (7) Qorno (1) Talada (1) Soosaara (5) Barootiin (9) Caanaha Murqaha (3) Kibirka Puritan (1) Caafimaadka Tayada (4) Reebok (8) Dib u eegid (1) Mashiinnada safka (2) Sears (2) Koobka Shaker (1) FitnessRebates.com (1) Kabaha (13) Shoes.com (1) Slendertone (1) Fitness siman (8) Jimicsiga kali ah (1) Bixinta Koonfurta Xeebta (1) Isbaanish (1) Tartan isboorti (5) Maamulka Ciyaaraha (1) Xidhitaan Xoog Leh (1) Dukaan Dheeraad ah oo Xooggan (1) Super supplements (1) Dheeraad ah (34) ToGo (4) Qorno Somers (1) Wareegyada (1) Wadarta Jirdhiska (2) Treadmills (16) Horizon (1) Mudnaan (1) Phoenix (1) Precor (1) Qaab (6) Reebok (1) Siman (2) Kali (1) Weslo (2) Twitter (4) Bixinta Duffel Bag (1) Bixinta T-Shirt (3) Mashiinka Mashiinka gariirka (1) Ciyaar Video (1) Muhiim ah (1) VitalMax (1) Faytamiin Shoppe (3) Fitamiin Dunida (3) Weider (2) Jimicsiga (1) Workoutz.com (1) Qalabka Yoga (4) Qorno (1) Qorno Fitness (1) Zumba (5)
Archives Select Month September 2020 March 2020 January 2020 December 2019 October 2019 August 2019 March 2019 February 2019 January 2019 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 June 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 November 2017 October 2017 2017 karaa April 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 July 2016 June 2016 2016 karaa April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 2015 karaa April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 2014 karaa April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 2013 karaa April 2013 March 2013 February 2013 January 2013
Dib-u-Celinta Fudud Xuquuqda daabacaadda © 2020 | Mowduuca: Style Magazine Waxaa suuro galiyay WordPress ↑